Ee, Opekempe kacha nta maka ihe mkpuchi nwere ike ịtụfu na-abụkarị iberibe 5000.
Enwere m ike ịzụta ihe atụ na-enye iwu?
Ee, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ VTECH?
Anyị nwere uru 5 bụ isi:
1) Ọkachamara KN95 na-emepụta ihe mkpuchi ihu.
2) Ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, na-enye ego site n'ọnụọgụgụ.
3) Nwere ike hazie gị chọrọ.
4) Akwụkwọ ikike dị mma na ọrụ ire ere zuru oke.
5) Ahịrị mmepụta nke ọma na ọnụọgụ mmepụta kwụsiri ike.